Iindaba -Intliziyo yesitshixo sombane esikhulu sombane e-China, esenziwe yi-BEJARM
Intliziyo yefeni yombane enkulu yombane e-China, eyenziwe yi-BEJARM
Imoto sisixhobo esiguqula amandla ombane abe ngamandla oomatshini. Kumatshini, kufana nentliziyo, ukubonelela ngamandla ekusebenzeni kwayo. I-Bejarm ebekwe kwisithili sethu, lishishini elinjalo eligxile kwi-R & D kunye nokutsha kweemoto.
Kwisithili senkampani yenkampani iBejarm, kukho ifeni enkulu exhonywe ngaphezulu kwesakhiwo sefektri. Inxalenye emnyama embindini we fan yimbonakalo yemagnethi esisigxina eqhuba ngokuthe ngqo imoto eveliswe yinkampani yeBejarm yokulinga kunye nokufumanisa. "Le fan blade ineemitha ezi-7.3 ubude,
obona bububanzi bubukhulu babavelisi kwimizi-mveliso eTshayina, nemoto esembindini incinci kakhulu xa ithelekiswa nayo. "Xa kuthelekiswa nefeni enkulu ekhangeleka njenge" Big Mac ", indawo emnyama embindini ayibalulekanga, kodwa yona yeyona "ntliziyo" ibaluleke kakhulu ukuqhuba ifeni.
Njengeyona nto iphambili yomlandeli, indima yayo iyazibonakalisa. Ukuze uqhube fan enkulu kangaka, imoto ibifanele ukuba ibinkulu kakhulu, kubandakanya isigaba esine-asynchronous motor kunye nesinciphisi, njl.njl. Ngobuchwephesha bokuyila izinto ezintsha, umthamo weemagnethi esisigxina eqhuba ngqo yimoto eveliswe yinkampani incinci kakhulu, kodwa "amandla" akakho ngaphantsi. Umzekelo, le fan inemoto yemagnethi esisigxina yeBejarm, efakwe kubude obungaphezulu kweemitha ezi-6, inokugubungela i-800 yeemitha zesikwere ukuya kwi-1000 yeemitha zesikwere sendawo. Abantu bayayiva imeko yomoya wendalo. Ngoku ayijiki njenge fan yombane eqhelekileyo isantya sayo sihluka kakhulu. Isantya sefeni yombane ngokubanzi siyakhawuleza kakhulu, kodwa umoya awunamandla kangako, kwaye isantya sokujikeleza siyacotha, kuphela ukujika okungama-50 ukuya kuma-70 ngomzuzu, kodwa unomthamo omkhulu womoya. Ifeni ivuselela ukuhamba komoya kuyo yonke indawo, enokuvumela umzimba womntu ukuba uzive ukhululeke kakhulu kuba akukho nto ipholileyo yokupholisa ngokulula kwindawo evaliweyo.
Imagnethi enkulu esisigxina yokuqhuba ngokuthe ngqo abalandeli beefektri banokufakwa kwiindawo ezininzi, ezinje ngeemarike zemifuno, iivenkile ezinkulu, iinkundla zebhola yomnyazi, indawo yokwenza umthambo, izityalo zeshishini njalo njalo. Ngaphaya koko, ukusetyenziswa kwamandla kusezantsi kakhulu, ngaphantsi kwesidanga esinye ngeyure. Okwangoku, ngovavanyo lokuqala eShanghai, eSuzhou naseNingbo, umazibuthe osisigxina othe ngqo wokuqhuba iimoto ophuculwe yimoto yeBejarm ufumene ukusebenza kwengxolo ephantsi kunye nesiphumo esihle, oko kuthetha ukuba inethemba lokuthengisa ngokubanzi kwaye iya kuba "ithembisa" kwimakethi kunyaka olandelayo.
Imakethi yabalandeli bemizi-mveliso izakubanomdla kakhulu kulo nyaka uzayo, kwaye umthamo wentengiso kulindeleke ukuba ubeyi-5000 ukuya kwi-10000. Ukongeza, amaqela e-R & D enkampani ye-Bejarm ngaxeshanye aphuhlisa ukusetyenziswa kwamandla okuthembakeleyo kunye nokulawulwa kwamandla kwiinkalo ezininzi, ezinjengamanzi ahlakaniphile, ukuveliswa kwamandla omoya, oomatshini bokuzenzela, izixhobo zokuphakamisa (ilifti), njl. Kwixa elizayo, inkampani iBejarm iya kwenza ukusetyenziswa okukhulu kwezixhobo ezininzi ukubonelela ngamandla ekhompyuter yetekhnoloji.